Mmanya na -ejikọ Catenas na Rothschilds: Tinye CARO Ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Mmanya na -ejikọ Catenas na Rothschilds: Tinye CARO Ọhụrụ
Akụkọ na -agbasa ozi Argentina • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • ndị mmadụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
LR - Dr. Nicolás Catena na Baron Eric de Rothschild
Enwere onwe gị ịkpọ m ihe ọ wineụ wineụ mmanya! Mgbe m rịbara ama na a na -emepụta mmanya site na mmekorita dị n'etiti Domaine's Barons de Rothschilds (Lafite) na usoro ndị ezinụlọ Argentina Catena - m na -efopụ ụzarị ụbụrụ m nke COVID kpatara wee mara, dịka ezinụlọ abụọ ahụ nọ na ahịa mmanya kemgbe. Afọ 1800.
Ndị Rothschild na -agbasawanye mmasị n'ubi vaịn gafere France kemgbe iri afọ.
Mmekọrịta ya na ndị Catenas na Malbec ha malitere na 1999, ihe dị ka afọ 11 tupu mgbe ahụ (1988), ka Rothschilds nwetara Vina Los Vascos na Chile.
Na 2008, na nkwado CITIC nke China, ndị Rothschild bidoro ubi-vine na Penglai, China, nke dị nso na Penglai n'etiti etiti mpaghara hekta 377 echekwara.
Ihe ama ama na ama ama gbasara mmekọrịta ya na ụlọ ọrụ Catena bụ na Jancis Robinson toro Nicolas Catena Zapata, “… na -etinye mmanya ndị Argentina na maapụ ụwa.” Larry Stone nke James Beard Foundation kpebisiri ike na Nicolas Catena Zapata nọ n'otu egwuregwu dị ka Robert Mondavi n'ịmepụta ọnọdụ mmanya Napa, "na -akpali mpaghara niile ka ọ gbaa mbọ maka ogo dị elu…"
Akara “Caro” bụ ngwakọta nke aha ezinụlọ abụọ-Catena na Rothschild na ntinye nke nka Rothschild, itinye ego, ịzụ ahịa na itinye ego ndị ọzọ enyerela Catena mmanya aka ịkwaga n'ọkwa ọzọ yana ka nzukọ mee “nke kacha maa mma. mmanya si Argentina"(Laura Catena).
Ileghachi Anya n'azụ. Na-aga n'ihu
Argentina na -ere naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmanya ya n'ụwa niile. Obodo a bụ onye kacha emepụta mmanya na Latin America na nke ise kacha ibu n'ụwa. Mpaghara na -eto mmanya, na ndagwurugwu Ugwu Andean, na -atụnyere ndagwurugwu Napa nke California. Aregbè Mendoza na San Juan, ebe etiti mmanya mba ahụ, ka amaara mba ụwa maka Malbec, yana Bonarda, Syrah na Cabernet Sauvignon. Ọ dị mma ịmara na Malbec bụbu mmanya dị mkpa na Bordeaux ruo mgbe ọrịa na ụmụ ahụhụ butere ọdịda mkpụrụ vaịn. Ndị France butere ụdịdị Bordelaise na Argentina n'etiti afọ 1800 ebe obi dị ụtọ. Onweghị nsogbu ọ bụla dara French Malbec nke dị na ugwu Andes ka a na -akụ ubi vaịn ndị Argentina n'elu ahịrị ebe ahụhụ enweghị ike ịgbasa na ala dị larịị na -enye nnukwu anwụ anwụ na -adịghị akwụsị akwụsị.
Ụlọ ọrụ mmanya nke Argentina anatala ọgwụgwọ pụrụ iche site n'aka gọọmentị mba na -egbochi ya n'ọgba aghara akụ na ụba ugbu a na mba ahụ. Gọọmentị kpebisiri ike na a ga -ahapụrịrị ebe a na -ere mmanya ka ọ rụọ ọrụ dị ka ime mmanya bụ “ọrụ dị mkpa” na -enye ohere ka ọtụtụ n'ime ụlọ mmanya na -arụ ọrụ na -akwụsịghị akwụsị n'oge ọrịa ahụ niile.
Mkpọchi ahụ mụbara oriri mmanya na mba ahụ na -egosi mmụba pasent 7 karịa afọ 2019 mgbe ire mmanya dị ihe dị ka nde hectoliters 8.83, ebe edere nde hectolite nde 8.4 na 2018. Site na Jenụwarị ruo Ọgọst nke 2020 ire mmanya na -ere ruru nde hectoliters 6.21. Dabere na onye ọ bụla, na 2019, ị perụ mmanya otu onye na Argentina ruru lita 19.5 kwa mmadụ, site na 18.0 lita onye ọ bụla edere n'afọ gara aga. Nke a mere n'ezie ndị na -a wineụ mmanya ọ happyụ asụ ka Argentina na -ere naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmanya ya na mpụga mba ahụ. Mbupụ mmanya na -abawanye site na pasent 21 site na Jenụwarị ruo Nọvemba ma e jiri ya tụnyere ọdịda ụwa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 6 (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Ezinaụlọ Catena jiri uru a zuru oke (dị ka onye na -emepụta nri) na mbido Covid (Machị 20, 2020) ndị ọrụ ahụ na -etinye mkpuchi na uwe aka wee banye n'ime ubi vaịn iji chịkọta mkpụrụ vaịn fọdụrụ nke owuwe ihe ubi pụrụ iche.
Ihe bụ ọdachi maka akụkụ ndị ọzọ nke Argentina abụrụla ahụmịhe dị mma maka Caro maka Eprel 1, Drinks International, mara ọkwa na Catena Zapata tozuru oke Nri Wine Brand kacha mma n'ụwa (2020) site n'aka otu mba na -azụ mmanya na ndị ọkachamara mmanya. , gụnyere ndị ọkachamara mmanya sitere na mba 48 dị iche iche.
N'ebe dị anya na nkeonwe
Kemgbe mmalite narị afọ nke 20 (1902) a mara Catena winery maka iwepụ Malbec na nkwado ndụ yana ịghọta uru oke egwu dị elu dị na ndagwurugwu Andean nke Mendoza, Argentina.
Nicolas Catena, onye na-a wineụ mmanya nke ezinụlọ nke ọgbọ nke atọ, bụ onye Argentine izizi butere karama klaasị Malbec nke nwere akara Catena. Taa, ya na nwa ya nwanyị Dr. Laura Catena na -aga n'ihu ịgbasa iru mmanya mmanya Caro ha. Onye isi mmanya, Alejandro Vigil sonyeere Catena Zapata na 2002
Ubi vaịn Andrianna fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 5000 n'ịdị elu ma mara ya dị ka Grand Cru nke South America.
Ebe dị elu na -agba mkpụrụ vaịn Malbec ume ka ọ nwekwuo acidity ya mere ha na -atọ ụtọ karịa. Akpụkpọ anụ ndị ahụ siri ike na -emepụta mkpụrụ vaịn nke ukwuu ma na -atọ ụtọ, na -enye mmanya nke ọma. Ebe ọ bụ na Malbec nwere ahụ zuru oke, na-adị ndụ ma jupụta na mkpụrụ osisi, usoro na ụdị agwa Cabernet Sauvignon na-eto ma na-akwalite mmanya ikpeazụ.
Otu varietal nke Caro mepụtara bụ Aruma ya na mmanya ndị ọzọ bụ ngwakọta nke mkpụrụ vaịn abụọ, Malbec (ike mbukota, nkwuwa okwu na mkpụrụ osisi), na Cabernet Sauvignon (inye onyinye na ọkaibe).
Mkpụrụ vaịn niile maka mmanya Caro ka a na-eji aka na aka were ya tupu iwepu ya na ịzọpịa ya na-ewepụ ohere mkpụrụ vaịn mebiri emebi na osisi tannic ga-abanye na ngwakọta, na-emepụta gburugburu zuru oke maka mmanya dị nro na nke siri ike.
• Bodegas Caro Aruma (abalị: asụsụ Indian Mendoza ala) 2019. 100 % Malbec si Valle de Uco (Altamira, El Peral na San Jose). Emegheghị ya.
Aha ahọpụtara ka ọ bụrụ akara nke oke oke ikuku na oke ikuku nke abalị Andean. Fermented na igwe anaghị agba nchara tankị na agadi na ciment tankị nke na -edobe mmanya ahụ mgbe niile. Mkpụrụ vaịn Malbec rutere na Ajentina ekele onye ọrụ ugbo France nke chọpụtara ohere mkpụrụ vaịn na-eto nke ọma na elu elu Mendoza (1868).
Anya na -ahụ raspberries gbara ọchịchịrị mgbe imi na -ahụ blakberị, ose oji, plums, mkpụrụ osisi na -acha ọbara ọbara, ihe na -esi ísì ụtọ (nke dị mma), na violet. Na -atọ ụtọ ụtọ, mmanya a na -enye cranberries, blueberries, na ụfọdụ tannins. Tụlee ya ka ọ bụrụ ahụmịhe ụtọ nke Malbec. Mepee awa ole na ole tupu sips amalite ka ọ na -emepe ma jiri mmesapụ aka na -enye ahụmịhe ọnụ dị ụtọ. Jikọta ya na cheeseburger acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọkụkọ mmanya.
• Bodegas Caro Amancaya (ifuru ugwu Andes) 2018. 70 % Malbec, 30 % Cabernet Sauvignon. A na -egbute mkpụrụ vaịn site na nkata pụrụ iche nke osisi ochie na Lujan de Cuyo, na Altamira. Na Lujan, a na -akụ mkpụrụ vaịn n'ụdị nke loam, nkume na ajịrịja; na Altamira, ubi vaịn dị 100m karịa elu oke osimiri n'elu akwa mmiri ochie nke Osimiri Tunuyan. Edebere ka ọ tozuo na nnukwu osisi oak (pasent 20 ọhụrụ) maka ọnwa iri na abụọ na -emepụta tannins mara mma. Ọ bụ Lafite Rothschild na France na -emepụta barel ndị ahụ. Mkpụrụ vaịn mbụ maka mmanya a bụ 12. A na -ewere mmanya a ka ọ nwee “njirimara Argentina na ụdị Bordeaux” (Lafite.com).
Mkpesa anya na -eme ka nke a gaa mmanya ma ọ bụrụ na ruby ​​red bụ nhọrọ ụcha gị. Dị ka ihe na -amasị imi, mmanya na -enye koko, mkpụrụ fig, mkpụrụ osisi na -acha ọbara ọbara na pawuda na n'ikpeazụ, mkpụrụ osisi ojii na -atọ ụtọ na osisi oak na -akwado. Oge mmeghe (ma ọ bụ ụbọchị) tupu ị drinkingụ mmanya - ka ikuku na -enweta, ka ọ na -enyekwu ụtọ na ụtọ na mgbagwoju anya. Jikọta ya na Barbeque, ọgịrịga, soseji ma ọ bụ nwa atụrụ
• Bodegas Caro 2017. Pasent 74 Malbec, pasent 26 Cabernet Sauvignon. Mee agadi opekata mpe afọ 1.5 na gbọmgbọm, pasent 80 ọhụrụ.
Kwụsị! Ị ga -enwerịrị ọmarịcha ụcha violet nke mmanya a. Mgbe ahụ, ka imi gị rụọ ọrụ ya… chọta ngwakọta nke isi na -atụ aro raspberries, ose ojii, violet, cloves na chocolate gbara ọchịchịrị. Tannins ndị ahụ dị nro na -emetụta okpo ọnụ ya ma jikọta ya nke ọma na acidity na -enye ume ọhụrụ. Steak gị ghere eghe ga -ekele gị maka enyi ọhụrụ ya.
Mmanya a nwere obere mmepụta ya, ọ naghị etolite kwa afọ. Ọ dị ụkọ n'ihi na o si n'otu mpaghara mpaghara egwu. Ugwu na mmiri ozuzo dị ụkọ na Mendoza yabụ mgbe ọ na -ezo - ọ na -adị oke arọ, ala adịghịkwa njikere ị nweta mmiri niile na -emepụta osimiri na -asọda na Andes. Osimiri n'ime narị afọ gara aga ekepụtala ndị na -anụ ụtọ mmiri na -abanye n'ime osimiri, ndị na -akwado ya nwere ala dị iche iche na -eme ka ịmara ala dị mkpa. Mkpụrụ vaịn Caro na -eto n'ubi vaịn na oghere pụrụ iche nke okpuru ala mepụtara. Mkpụrụ vaịn ndị a na -etolite n'ala na -ahụ anya, nke bụ nzu, calcium nke jupụtara na limestone. Mmanya ahụ na -aka nká na mmanya tupu agbaze.
Lin Dr. Elinor Garely. Enweghi ike imeghari ederede edemede a, tinyere foto, na-enweghị ikike ederede site n'aka onye edemede.